Amaphoyisa axwayisa umphakathi ngobugebengu | News24
Amaphoyisa axwayisa umphakathi ngobugebengu
Amaphoyisa aseVerulam aphume umkhankaso wokuqwashisa umphakathi ngobugebengu. ISITHOMBE: ANDILE SITHOLE
AMAPHOYISA aseVerulam aphume umkhankaso wukuqwashisa amalungu omphakathi ukuba axwaye ukuphatha izizumbulu zemali njengoba sekusondele isikhathi samaholidi kaKhisimusi.
NgoLwesihlanu olwedlule amaphoyisa ahambele Ezindaweni ezahlukene eVerulam okubalwa iCottonlands, Canelands kanye ne Buffelsdraai exwayisa amalungu omphakathi ngobugebengu obuvamise ukwenzeka ngezikhathi zamaholidi kaKhisimusi.
Kuphinde kwanikezwa amalungu omphakathi izinombolo okumele azisebenzise njengoba kuza isikhathi sama-holidi.
Imenenja yesigceme sase Waterloo uConstable Sphindile Mabizela uthe: “Sixwayisa amalungu omphakathi ukuba avule amehlo kakhulukazi labo abazobe behlukanisa izimali zesitokofela ukuba bathinte amaphoyisa uma benokwesaba noma kukhona izinto ezenza basole ukuthi kukhona ubugebengu,”echaza. Okhulumela amaphoyisa ase Verulam W/O Mark Prakasim uxwayise amalungu omphakathi azobe ehlukanisa izitokofela ukuba athinte amaphoyisa uma bezohlukanisa imali. “Sizoqhubeka nokuxwayisa amalungu omphakathi ukuze kugwemeke ubugebengu. Sicela abantu uma bezovakasha bathinte amaphoyisa ukuze lezo zindawo kwandiswe isibalo samaphoyisa azobheka endaweni,” ephetha.
Ngeminye imininingwane ungathintana no W/O Prakasim kulenombolo 032 541 5214.